Nofeembar 7, Samsung waxay ku dhawaaqeysaa moobilkeeda shaashad isku laaban | Androidsis
Samsung taleefanka shaashadda ee isku laaban ayaa lagu dhawaaqi doonaa Nofeembar 7
Shaashadaha isku laaban waxay bilaabi doonaan inay caan ku noqdaan ku dhawaaqista, the soo socota Nofeembar 7, oo ka socota taleefanka gacanta ee Samsung kaas oo lagu sifayn doono laba qaab oo shaashad ah mid.
Waxaan dhihi karnaa sababtoo ah laba mid ayaa macnaheedu yahay in mobiilka shaashadda laaban ee Samsung uu yeelan doono 7,3-inji Super AMOLED weyn iyo mid kale oo sare oo ah 4,6 inji. Waxay kuxirantahay waxa aan dooneyno, waxaan u rogi karnaa hal ama cabir kale.
Waxay ku jiri doontaa Shirka Horumarinta Samsung ee San Francisco halkaasoo lagu soo bandhigi doono moobilkan xiisaha leh ee shaashadda isku laaban. Waxaan u isticmaali karnaa sida ugu badan ee kaniiniga ah, qaabkaas ah 7,3 ″, iyo sidoo kale moobayl leh shaashad aan ka badnayn 4,6 inji taasna way yaraan kartaa markaan u baranno qaar ka badan 5,5, XNUMX inji.
Samsung Display waa alaab-qeybiyaha labada shaashadood ee la filayo inay soo saaraan bishaan. Ilaa 100.000 oo unug bishii ayaa la soo saari doonaa, halka la filayo inay gaari doonaan soo saar inta u dhexeysa 500.000 oo unug ilaa 1 milyan sanadkii. Shirkadda Kuuriya waxay horey u qorsheysay inay iibiso tiro kooban oo noocyada aaladahaas ah oo iyagu keligood noqon doona.
Qalab shaashaddiisa la duubi karo (midkoodna sawiradu ma ahan kan Samsung), wuxuu keenaa nooc kale oo khibrad ah iyo wejiyada imtixaanka. Si ay u waxay kiraysatay KH Vatec, oo taxaddar ku bixisay in la hubiyo iska caabinta aaladda inta badan la helo iyada oo laaban iyada iyo labadeeda shaashad.
Waxay noqon doontaa maalinta ku xigta berri markaan ognahay wax walba oo ku saabsan casrigaan xiisaha leh oo leh shaashad isku laaban oo la socon doonta taleefanka nooca qolofka, kaas oo sidoo kale looga dhawaaqi doono San Francisco. Waan arki doonnaa sida imaatinka aaladu saameyn ku yeelanayo si ka duwan rimidda, in kasta oo summad aan la garanayn sida Rouyu wuxuu durbaba bilaabay mid leh astaamahaas.
Una Samsung wali waxay eegaysaa mustaqbalka xukunka hadda oo leh tiro aalado iyo teknolojiyad ah, sida Galaxy S10 iyo iyada shidma shaashadda, ama kuwa kale teknoolojiyada aan kaa tagi doonin danayn la'aan cidna.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung taleefanka shaashadda ee isku laaban ayaa lagu dhawaaqi doonaa Nofeembar 7
Astaamaha LapBook Pro, Chuwi ee cusub ee la qaadi karo
Belle Launcher, oo ah Launcher aad u kala duwan oo ku saabsan Android-kaaga